I-Nintendo Switch Emulators ye-PC ne-Android | Iforamu yeselula
U-Ignacio Sala | 20/11/2021 12:00 | Izinhlelo
Selokhu yethulwa ngo-2016, iNintendo Switch isibe enye yezinto eziduduzayo iningi elidayiswe eminyakeni yamuva, ikhonsoli ephathekayo enezithameli zayo futhi okungeyona enye ngaphandle kwabathandi bemidlalo yakudala yeNintendo kanye nezingane ezincane.
I-Nintendo Switch iyikhonsoli engehli intengo ngokuhamba kwesikhathi futhi kunzima kakhulu ukuthola, uma kungenjalo cishe akunakwenzeka, noma yikuphi ukunikezwa okuthakazelisayo kwale khonsoli. Uma singeke sikwazi ukuyithenga, singasebenzisa a I-Nintendo Switch emulator ye-PC ne-Android.
Ngikusho lokho, nge-PC ne-Android, ngoba i-Apple ayivumeli izinhlelo zokusebenza ze-emulator ukuthi zitholakale ku-App Store, ngakho sebenzisa idivayisi ye-iOS ukuze udlale i-Nintendo Switch Akuyona inketho.
1 Nintendo Shintsha emulators for PC
1.3 I-Emulator ye-Cemu
2 Ama-emulators we-Nintendo Shintsha we-Android
2.1 I-Emulator ye-Android Nintendo Switch
2.2 I-Skyline Emulator
3 Ingabe i-Nintendo Switch emulators isemthethweni?
Nintendo Shintsha emulators for PC
I-emulator ye-Yuzu, kuze kube manje, i-emulator ye-Nintendo Switch ethandwa kakhulu ye-PC futhi esingadlala ngayo cishe noma yimuphi umdlalo we-Shintsha ngokusebenza okuhle kakhulu.
Le emulator idalwe ngabakwa Abathuthukisi be-Citra, i-emulator edumile ye-Nintendo 3DS. Kubasebenzisi abangenawo ulwazi emhlabeni wama-emulators, kungaba nzima ekuqaleni, nokho, futhi i-inthanethi ne-YouTube kunenombolo enkulu yeziqondiso nezifundiso.
I-Yuzu idume kakhulu kangangokuthi isetshenziswa njengesisekelo sokudala amanye ama-emulators we-Shintsha esikubonisa yona kulesi sihloko, iyasivumela. dlala kuze kufike ku-4K ukulungiswaUma imishini yethu isebenza kahle futhi ihambisana nehluzo ze-Nvidia ne-AMD.
Isekela i- imidlalo eminingi ye-A kathathu, ukuze sikwazi ukudlala noma yibaphi abathengisi abakhanga kakhulu bale khonsoli njengeLegend of Zelda. Kulokhu isixhumanisi, ungathola uhlu lwayo yonke imidlalo ehambisana ne-Yuzu.
Amaphuzu amabi ale emulator yilokho akuzona zonke izilawuli ezihambisanayo, izinkinga ekugcineni isivinini esinqunyiwe sezithombe kanye nobunkimbinkimbi baso lapho zilungiswa.
Ukulanda i-Yuzu, ungadlula le phrojekthi yomthombo ovulekile y yilande mahhala.
Ngokungafani ne-YuZu, i-Ryujinx iyi-emulator kulula kakhulu ukumisa, kodwa ayisinikezi izici ezifanayo, kodwa singayibheka njengenketho yesibili engcono kakhulu yokulingisa i-Nintendo ku-PC, i-Mac noma i-Linux, esivumela ukuthi sidlale imidlalo ngesilinganiso esiphezulu esingu-60 fps ngendlela ezinzile neyanele. hardware.
Ukuba lula ukukulungisa, uma ungadingeki wenze impilo yakho ibe nzima ukuze ujabulele Shintsha imidlalo ku-PC yakho, lolu uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu, uhlelo lokusebenza olune-interface elula kakhulu ongayisebenzisa futhi. inemidlalo ehambisanayo engaphezu kuka-1.000, nakuba isigamu sazo sisebenza ngendlela efanele namuhla.
Ukulanda i-emulator ye-Ryujinx, unga kusuka kuwebhusayithi yakho ngokuchofoza ku- lesi sixhumanisi.
UCemu wayengomunye walaba ama-emulators okuqala akwazi ukusebenzisa imidlalo yeNintendo Shintsha, kodwa, ngaphezu kwalokho, futhi kusivumela ukuthi sijabulele izihloko ezivela ku-Gamecube kanye ne-Wii U. Nakuba kungeyona inketho engcono kakhulu yokujabulela izihloko ezivela ku-Switch, onjiniyela ngezikhathi ezithile babuyekeza lesi silingisi ukuze sithuthukise ukusebenza kwaso futhi bengeze izici ezintsha.
Iyahambisana nehluzo ze-Nvidia ne-AMD, idinga i-Windows 7 64-bit noma ngaphezulu kanye nememori engu-4 GB, ngo-8 GB inani elinconyiwe. Vuliwe lesi sixhumanisi, ungabona yonke imidlalo ehambisana nale emulator.
Kusivumela dlala izihloko eziningi ku-1080 naku-60 fps, inenombolo enkulu inenani elikhulu lezinketho ezithuthukisiwe ezisivumela ukuthi siguqule ukunikezwa, ukulungiswa, ukuthungatha futhi, ngaphezu kwalokho, kusivumela ukuthi siguqule izihloko ngokuqondile kusuka kuzilungiselelo zokuqalisa, ezingenza isipiliyoni sibe mnandi nakakhulu. .
Iphuzu elibi lale emulator ukuthi inani lezihloko ezisekelwayo lincane kakhulu futhi ukucushwa kwezilawuli akulula. Ungalanda le emulator ngokuqondile kuwebhusayithi yayo nge lesi sixhumanisi.
Ama-emulators we-Nintendo Shintsha we-Android
Ngaphakathi kwe-Nintendo Switch, kune-hardware ehambisana ne-ARM processor, efanayo naleyo eyayikhona phakathi nebanga locingo lweselula kusukela eminyakeni emi-4 edluleKodwa-ke, inani lama-emulators atholakalayo kule ecosystem lincishiswa kakhulu libe amabili.
I-Emulator ye-Android Nintendo Switch
I-Android Nintendo Switch Emulator yafika emakethe ngo-2020 futhi iyakwazi ukusebenzisa eminye yemidlalo edume kakhulu kule khonsoli efana neThe Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go ... nokho, ngenxa yemikhawulo yama-smartphones naphezu kwalokho. isekela izihloko ezingafika kwezingama-81, iningi labo liyalenga ngesikhathi somdlalo.
Lena enye yama-emulators asebenzisa i-cIkhodi ye-emulator ye-Yuzu PC, esikhulume ngayo ekuqaleni kwalesi sihloko, ngaleyo ndlela yephula ilayisensi yesofthiwe yamahhala.
Okwamanje, lesi emulator isebenza kuphela ngenkinobho yokulawula ethile lapho i-smartphone ilingana, nokho, umqondo uwukwethula inguqulo ehambisana nanoma yisiphi isilawuli kude.
Unayo ulwazi olwengeziwe mayelana nale emulator ngokusebenzisa lesi sixhumanisi.
I-Skyline emulator iyi-emulator yomthombo ovulekile yeNintendo Shintsha lokho isathuthuka futhi yakhelwe ukuthi ihambisane 100% ne-Android, nokho, usungaqala ukuyihlola, njengoba ikhodi itholakala nge GitHub, nakuba isesigabeni sokuthuthukiswa, kungenzeka ukuthi iphahlazeke izikhathi ezingaphezu kwesisodwa.
Ingabe i-Nintendo Switch emulators isemthethweni?
Ayikho i-emulator esemthethweni, ngoba basebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukiswe enye inkampani, kuleli cala iNintendo, ngaphandle kokuba namalungelo, naphezu kweqiniso lokuthi akekho kulawa ma-emulators okhokhelwayo.
Ngaphezu kwalokho, yonke imidlalo etholakalayo iyatholakala yakho landa mahhala, okufaka isandla, ngisho nangaphezulu, ekulimazeni inkampani yaseJapane ngokwezomnotho.
Okusobala ukuthi noma ngubani osebenzisa i-emulator kungenxa yokuthi awunawo amandla omnotho wokuthenga ikhonsoli, ngakho-ke umonakalo wezomnotho okusolwa ukuthi abakhiqizi be-console bahlale bewusho uba yize.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo » Izilingisi ze-Nintendo Shintsha ze-PC ne-Android